တနင်္လာ သားသမီးများ အတွက် ၂၀၁၉ ခုနှစ် ( ၈ ) လပိုင်း တစ်လစာ ဟောစာတမ်း - Real Gaming Myanmar
တနင်္လာ သားသမီးများ အတွက် ၂၀၁၉ ခုနှစ် ( ၈ ) လပိုင်း တစ်လစာ ဟောစာတမ်း
ဘဝ တစ်ခုလုံး အတွက် ကြီးမားသော အပြောင်းအလဲများ ကြုံတွေ့ရ လတ္တံ့ ။ အမှန် ဘက်ကနေ စကားပြော ငြင်းခုန်ရခြင်း ၊ ဆေးရုံ ဆေးခန်း ၊ အမှု အချုပ် ၊ ထောင်ဂတ် များနှင့် ပက်သက် ရခြင်း ၊အနားဝန်းကျင် တွင် မီးလန့်ရှော့ဖြစ်ကြုံရတတ်ခြင်း ၊ သူများ ပြဿနာ ကြားဝင် ခေါင်းခံ ဖြေရှင်း ပေးရခြင်းတို့ ကြုံရ လတ္တံ့ ။ အလုပ်နေရာ ၊ အိမ်နေရာ အပြောင်းအလဲများ ကြုံရလတ္တံ့ ။ မိမိ၏ ဘဝခံယူချက်များ ၊ အတွေးအခေါ် အယူအဆများ ၊ ကိုယ်ကျင့် တရားများ ၊ လုပ်နည်း လုပ်ဟန်များလည်း ပြောင်းလဲအံ့ …။
စိတ်တိုလွယ် ဒေါသ ထွက်လွယ် ၊ စိတ်လိုက် မာန်ပါ ပြောဆို လုပ်ကိုင်တာတွေရှောင်ပါ ။ စိတ်ခံစားမှု ကိုအလို မလိုက်ပဲ ဦးနှောက် ဉာဏ်များများ သုံးသင့်ပါတယ် …။ ဖြစ်ချင် တာထက် ဖြစ်သင့် တာကိုဦးစားပေးပါ ။ မထင်မှတ် တာတွေ ဖြစ်လာတတ် ။ လူအား ၊ ဉာဏ်အား ၊ ဝီရိယအား စိုက်ထုတ်ပြီး များများ ကြိုးစားသင့် ပါတယ် … ။
အလုပ်သစ် လုပ်ရအံ့ ။ နေရာ ထိုင်ခင်း ပြုပြင်ရတတ် ။ အသစ်ရတတ် ။ အိုးပိုင်အိမ်ပိုင် မရှိသေးသူများ အိုးပိုင်အိမ်ပိုင်ရတတ် ။ လူကြီး အလုပ် နေရာထိုင်ခင် အိမ်တွင်းရေးအတွက် အနည်းငယ်စိတ်ပူရ တ်ပါတယ် … ။
စိတ်ပူစရာ စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စရာများ ၊ အတိုက်အခံအခက်အခဲများ ၊ မနာလို ရန်လုပ်သူများကြားမှ မိမိ၏အကြံအစည်ရည်ရွယ်ချက်များ ပြည့်မြောက်အောင်မြင်မည့်နှစ်ဖြစ်အံ့။ အခက်အခဲ စိန်ခေါ်မှုများကို တည်ငြိမ်စွာဖြင့် ကျော်ဖြတ် အနိုင်ယူသင့် တယ် …။
ကံတရား၏ မျက်နှာသာပေးခြင်း ၊ အကူအညီ အပံ့အပိုးပေးခြင်းကို မခံရပဲ ၊ မိမိ၏ ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ် ကိုယ်ပိုင်ဟန် ကိုယ်ပိုင်အစွမ်းအစများဖြင့် ကြီးပွားတိုးတက် အောင်မြင်ချမ်းသာမည့်နှစ်ဖြစ်တယ် …။
ငွေရေးကြေးရေး – ငွေအဝင်နည်းပြီး ဝင်သလောက်ပြန်ထွက်နေအံ့။ ငွေ မမြဲအံ့။ ငွေကြေးကိစ္စများ စိတ်ပူ ထစ်ငေါ့ပြီးမှ အောင်မြင်အံ့။ ငွေရင်းနှီးရသောအလုပ်များ သတိထားပြီးလုပ်ပါ။ အကြီးအကဲကူညီမစခြင်းကြောင့်သော်၎င်း ၊ စပ်တူရှယ်ယာလုပ်ငန်းများကြောင့်သော်၎င်း ငွေကြေးများရရှိလတ္တံ့ …။
ငွေရေးကြေးရေး အထူးယတြာ – ငွေမြဲရန် မကြာခဏ ငါသေတ္တာဗူးပေါ်တွင် ဖယောင်းတိုင်ထွန်းပြီး ဆုတောင်းပါ ။ငွေကြေးကံကောင်းရန် မကြာခဏ လမ်းမှာရှိတဲ့ ချိုင့်ခွက်ကို ကျောက်ခဲ ဖို့ပေးပါ …။
( ၎င်းယတြာများသည် လုပ်ရသည်မှာလွယ်ကူသော်လည်း အင်မတန်ထိရောက်အောင်မြင်သော ယတြာများဖြစ်သည်။ငွေကြေးကံကောင်းပြီး ဘဝတစ်ဆစ်ချိုးပြောင်းလဲမြင့်တက်ချမ်းသာသွားသည်များကို မကြာခဏတွေ့ကြုံဖူးပါ တယ် …။
ထို့ကြောင့် ယုံယုံကြည်ကြည် လေးလေးနက်နက် ဆောင်ရွက်စေလိုပါတယ် …။
ထီထိုးကံစမ်းရန် – လက်ဖက်ရည်နှင့် ပေါင်မုန့်ဘုရားလှူပါ ၊ သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေများကို ဒါနလုပ်ပါ ။ ပြီးလျှင် ပ ဖ ဘ ဗ မ ၊ ရ ယ လ ၀ ပါသောထီဆိုင်တွင် (၄) နှင့် (၅) များများပါသော ထီလက်မှတ်ကိုရွေးထိုးပါ။ ပါးစပ်မှနေ တာဗားနိုး ( TAVANO) ရွတ်ပြီးထိုးပါ …။
အချစ်ရေး – ကြီးမားသော အပြောင်းအလဲများဖြစ်အံ့။ ယခင်ကထက် တအားလည်းကောင်းလာနိုင်သလို တအားလည်းဆိုးသွားတတ်။ သတိထားသင့်။ အပျိုလူပျိုများ အချစ်ရေးတွင် မကြာခဏဆိုသလို စကားပြောငြင်းခုန်ဖြေရှင်းရခြင်း ၊ ပူပန်သောကရောက်ရခြင်း တို့ကြုံရအံ့။ စိတ်ပူစရာများ သဝန်တိုစရာများလည်း ရောထွေးနေတတ်ပါတယ် …။
အိမ်ထောင်ရေး – မကြာခဏဆိုသလို အသေးအဖွဲကိစ္စလေးမှအစ ကတောက်ကဆဖြစ်ရခြင်း တို့ ကြုံတွေ့ရလတ္တံ့။ ဘေးပယောဂများ ဝင်လာတတ်။ ကြားလူနှောက်ယှက်တတ်။ သတိထားသင့်။ ဆိုးဆိုးဝါးဝါးမရှိပါ။ ရန်ဖြစ်လိုက် ပြန်ချစ်လိုက် ဖြစ်နေတတ်ပါတယ် …။ မကြာခဏ အိပ်ယာခွဲအိပ်ပေးပါ …။
အချစ်ရေးအိမ်ထောင်ရေးတွင် တနင်္လာသားသမီးများ ၊ နာမည်တွင် က ခ ဂ ဃ င ပါသောသူများ ငွေ ၊ ခြံ ၊ ကား ၊ကျောက် ၊ ကုန်သည် ၊ ကွန်ပြူတာ ၊ ကင်မရာနှင့်ပက်သက်သူများ ဝင်ရှုပ်တတ် ပါတယ် …။
အချစ်ရေးအိမ်ထောင်ရေး အထူးယတြာ – နှစ်ယောက်ဓါတ်ပုံကို မျက်နှာချင်းဆိုင်ကပ်ပါ ။ ဓါတ်မှန်ပြားနဲ့ညှပ်ပါ ။ ဓါတ်ဗူးအလွတ်ထဲမှာထည့်ပြီး လုံအောင်ပိတ်ထားပါ …။ ( ၃ ရက်တစ်ခါလောက် အဖုံးလှပ်ပေးပါ)
ပညာရေး – မိမိရည်မှန်းထားသလောက်သာ အောင်မြင်နိုင်လတ္တံ့။ ကံတရား၏ အကူအညီပေးခြင်း ၊ နှောက်ယှက်ခြင်းကို မခံရပဲ မိမိရည်မှန်းထားသလောက် အောင်မြင်လတ္တံ့။ စိတ်ပူစရာအချို့ရှိသော်လည်း ပညာရေးရည်မှန်းချက်များ ပြည့်မြောက်အောင်မြင် နိုင်ပါမယ် …။
ပညာရေးကံကောင်းစေရန် – မနက်စောစော သစ်သီး(၆)လုံး ၊ နှင်းဆီ(၇)ပွင့်၊ သောက်တော်ရေ(၃)ခွက်၊ ဖယောင်းတိုင်(၃)တိုင် ဘုရားလှူပြီး မိမိဖြစ်ချင်တာကို ပြတ်ပြတ်သားသား သဲသဲကွဲကွဲ အသံထွက်ဆုတောင်းပါ။ ချိုးမယ့်ရေထဲမှာ နှင်းဆီ(၃)ပွင့်ထည့်ပြီးရေးချိုးရင်းလည်းဆုတောင်းပါ …။
ကျန်းမာရေး – ခြေထောက် ၊ ခါး ၊ အာရုံကြော ၊ ကျီးပေါင်း နှင့် ပက်သက်သောရောဂါ ဝေဒနာများ သတိထားသင့်ပါတယ် (တပ်အပ်ဖြစ်မည်ဟု မဆိုလိုပါ ။ သတိထားရန်ဖြစ်သည်)
ကျန်းမာရေးညံ့လျှင်ပြုလုပ်ရမည့်ယတြာ – တနင်္လာနေ့ည …။ ကော်ဗူးအစုတ်ထဲတွင် မိမိ၏ ခြေသည်း ၊ လက်သည်း ၊ ဆံပင် အနည်းငယ်ထည့်ပါ …။ အကျီအစုတ် ၊ လုံချည်အစုတ်ထည့်ပါ …။ ဆန်လက်တစ်ဆုပ်ထည့်ပါ …။ အိပ်ယာဘေးမှာ တစ်ညထားအိပ်ပါ …။ နောက်မေ့မနက် စီးနေသောရေထဲသို့သွားမျှောလိုက်ပါ …။ မကောင်းတဲ့အခိုကအညံ့တွေ ရောဂါတွေပါသွားပါစေလို့ဆုတောင်းပါ …။
အထူးလိုက်နာရန် … ကောင်းသောအပြောင်းအလဲများဖြစ်ရန် ဘာသာရေးပိုလုပ်သင့်၊မေတ္တာစိတ်မွေးသင့်၊မကြာခဏအိပ်ယာပြောင်းအိပ်သင့်။ခရီးခဏခဏထွက်သင့်တယ် …။
အခက်အခဲကြီးကြီးမားမားများ ကြုံတွေ့ရပါလျှင် …. တနင်္လာနေ့ညဝတ်အိပ်ထားသော အဝတ်ဟောင်းတစ်စုံကို နောက်နေ့မနက်စော လမ်းတွင်သွားစွန့်ပါ။ (ငါ့မှာရှိနေတဲ့မကောင်းတဲ့အခိုက်အညံ့တွေအားလုံး ပါသွားပါစေလို့ဆုတောင်းပါ) (၂)လတစ်ခါလုပ်ပါ။အရေးအကြောင်းကိစ္စပေါ်လျှင်ထပ်လုပ်ပါ …။
ပစ္စည်းများ အမြန်ရောင်းထွက်ရောင်းကောင်းရန် – အမြန်ရောင်းထွက်ချင်တဲ့ ၊ ရောင်းကောင်းချင်တဲ့ပစ္စည်းများကို အနီရောင်ပန်း(၆)ပွင့်နဲ့ရိုက်ပေးပါ …။ ပါးစပ်ကနေပြီးတော့လည်း ပြတ်ပြတ်သားသား ဆုတောင်းပါ …။ ဘယ်နေ့ ဘယ်ချိန်မဆို ဉာဏ်ရှိသလိုလုပ်ပါ …။
ယတြာ။ ။မည်သည့်နေ့တွင်မဆို မနက်(၇)နာရီ(၆)မိနစ်တိတိတွင် သစ်သီး (၆) လုံး ၊ နှင်းဆီ(၃)ပွင့် ၊ ဆွမ်းပူပူ (၃)ပွဲ ၊ သောက်တော်ရေ (၁)ခွက် ၊ ဖယောင်းတိုင် (၇) တိုင် ၊ ကို မိမိနေအိမ်ဘုရားတွင် မကြာခဏ လှူဒါန်းဆုတောင်းခြင်းဖြင့် တစ်နှစ်တာလုံး အခိုက်အညံ့များ ကင်းစင်ကြေပျောက်ပြီး အကြံအစည်များအောင်မြင် နိုင်မည် …။ (အကြောင်းရှိတိုင်း မကြာခဏပြုလုပ်နိုင်သည်)
တနင်ျလာ သားသမီးမြား အတှကျ ၂၀၁၉ ခုနှဈ ( ၈ ) လပိုငျး တဈလစာ ဟောစာတနျး
ဘဝ တဈခုလုံး အတှကျ ကွီးမားသော အပွောငျးအလဲမြား ကွုံတှရေ့ လတ်တံ့ ။ အမှနျ ဘကျကနေ စကားပွော ငွငျးခုနျရခွငျး ၊ ဆေးရုံ ဆေးခနျး ၊ အမှု အခြုပျ ၊ ထောငျဂတျ မြားနှငျ့ ပကျသကျ ရခွငျး ၊အနားဝနျးကငျြ တှငျ မီးလနျ့ရှော့ဖွဈကွုံရတတျခွငျး ၊ သူမြား ပွဿနာ ကွားဝငျ ခေါငျးခံ ဖွရှေငျး ပေးရခွငျးတို့ ကွုံရ လတ်တံ့ ။ အလုပျနရော ၊ အိမျနရော အပွောငျးအလဲမြား ကွုံရလတ်တံ့ ။ မိမိ၏ ဘဝခံယူခကျြမြား ၊ အတှေးအချေါ အယူအဆမြား ၊ ကိုယျကငျြ့ တရားမြား ၊ လုပျနညျး လုပျဟနျမြားလညျး ပွောငျးလဲအံ့ …။
စိတျတိုလှယျ ဒေါသ ထှကျလှယျ ၊ စိတျလိုကျ မာနျပါ ပွောဆို လုပျကိုငျတာတှရှေောငျပါ ။ စိတျခံစားမှု ကိုအလို မလိုကျပဲ ဦးနှောကျ ဉာဏျမြားမြား သုံးသငျ့ပါတယျ …။ ဖွဈခငျြ တာထကျ ဖွဈသငျ့ တာကိုဦးစားပေးပါ ။ မထငျမှတျ တာတှေ ဖွဈလာတတျ ။ လူအား ၊ ဉာဏျအား ၊ ဝီရိယအား စိုကျထုတျပွီး မြားမြား ကွိုးစားသငျ့ ပါတယျ … ။
အလုပျသဈ လုပျရအံ့ ။ နရော ထိုငျခငျး ပွုပွငျရတတျ ။ အသဈရတတျ ။ အိုးပိုငျအိမျပိုငျ မရှိသေးသူမြား အိုးပိုငျအိမျပိုငျရတတျ ။ လူကွီး အလုပျ နရောထိုငျခငျ အိမျတှငျးရေးအတှကျ အနညျးငယျစိတျပူရ တျပါတယျ … ။
စိတျပူစရာ စိတျအနှောကျအယှကျဖွဈစရာမြား ၊ အတိုကျအခံအခကျအခဲမြား ၊ မနာလို ရနျလုပျသူမြားကွားမှ မိမိ၏အကွံအစညျရညျရှယျခကျြမြား ပွညျ့မွောကျအောငျမွငျမညျ့နှဈဖွဈအံ့။ အခကျအခဲ စိနျချေါမှုမြားကို တညျငွိမျစှာဖွငျ့ ကြျောဖွတျ အနိုငျယူသငျ့ တယျ …။
ကံတရား၏ မကျြနှာသာပေးခွငျး ၊ အကူအညီ အပံ့အပိုးပေးခွငျးကို မခံရပဲ ၊ မိမိ၏ ကိုယျပိုငျဉာဏျ ကိုယျပိုငျဟနျ ကိုယျပိုငျအစှမျးအစမြားဖွငျ့ ကွီးပှားတိုးတကျ အောငျမွငျခမျြးသာမညျ့နှဈဖွဈတယျ …။
ငှရေေးကွေးရေး – ငှအေဝငျနညျးပွီး ဝငျသလောကျပွနျထှကျနအေံ့။ ငှေ မမွဲအံ့။ ငှကွေေးကိစ်စမြား စိတျပူ ထဈငေါ့ပွီးမှ အောငျမွငျအံ့။ ငှရေငျးနှီးရသောအလုပျမြား သတိထားပွီးလုပျပါ။ အကွီးအကဲကူညီမစခွငျးကွောငျ့သျော၎င်းငျး ၊ စပျတူရှယျယာလုပျငနျးမြားကွောငျ့သျော၎င်းငျး ငှကွေေးမြားရရှိလတ်တံ့ …။
ငှရေေးကွေးရေး အထူးယတွာ – ငှမွေဲရနျ မကွာခဏ ငါသတ်ေတာဗူးပျေါတှငျ ဖယောငျးတိုငျထှနျးပွီး ဆုတောငျးပါ ။ငှကွေေးကံကောငျးရနျ မကွာခဏ လမျးမှာရှိတဲ့ ခြိုငျ့ခှကျကို ကြောကျခဲ ဖို့ပေးပါ …။
( ၎င်းငျးယတွာမြားသညျ လုပျရသညျမှာလှယျကူသျောလညျး အငျမတနျထိရောကျအောငျမွငျသော ယတွာမြားဖွဈသညျ။ငှကွေေးကံကောငျးပွီး ဘဝတဈဆဈခြိုးပွောငျးလဲမွငျ့တကျခမျြးသာသှားသညျမြားကို မကွာခဏတှကွေုံ့ဖူးပါ တယျ …။
ထို့ကွောငျ့ ယုံယုံကွညျကွညျ လေးလေးနကျနကျ ဆောငျရှကျစလေိုပါတယျ …။
အခဈြရေး – ကွီးမားသော အပွောငျးအလဲမြားဖွဈအံ့။ ယခငျကထကျ တအားလညျးကောငျးလာနိုငျသလို တအားလညျးဆိုးသှားတတျ။ သတိထားသငျ့။ အပြိုလူပြိုမြား အခဈြရေးတှငျ မကွာခဏဆိုသလို စကားပွောငွငျးခုနျဖွရှေငျးရခွငျး ၊ ပူပနျသောကရောကျရခွငျး တို့ကွုံရအံ့။ စိတျပူစရာမြား သဝနျတိုစရာမြားလညျး ရောထှေးနတေတျပါတယျ …။
အိမျထောငျရေး – မကွာခဏဆိုသလို အသေးအဖှဲကိစ်စလေးမှအစ ကတောကျကဆဖွဈရခွငျး တို့ ကွုံတှရေ့လတ်တံ့။ ဘေးပယောဂမြား ဝငျလာတတျ။ ကွားလူနှောကျယှကျတတျ။ သတိထားသငျ့။ ဆိုးဆိုးဝါးဝါးမရှိပါ။ ရနျဖွဈလိုကျ ပွနျခဈြလိုကျ ဖွဈနတေတျပါတယျ …။ မကွာခဏ အိပျယာခှဲအိပျပေးပါ …။
အခဈြရေးအိမျထောငျရေးတှငျ တနင်ျလာသားသမီးမြား ၊ နာမညျတှငျ က ခ ဂ ဃ င ပါသောသူမြား ငှေ ၊ ခွံ ၊ ကား ၊ကြောကျ ၊ ကုနျသညျ ၊ ကှနျပွူတာ ၊ ကငျမရာနှငျ့ပကျသကျသူမြား ဝငျရှုပျတတျ ပါတယျ …။
အခဈြရေးအိမျထောငျရေး အထူးယတွာ – နှဈယောကျဓါတျပုံကို မကျြနှာခငျြးဆိုငျကပျပါ ။ ဓါတျမှနျပွားနဲ့ညှပျပါ ။ ဓါတျဗူးအလှတျထဲမှာထညျ့ပွီး လုံအောငျပိတျထားပါ …။ ( ၃ ရကျတဈခါလောကျ အဖုံးလှပျပေးပါ)
ပညာရေး – မိမိရညျမှနျးထားသလောကျသာ အောငျမွငျနိုငျလတ်တံ့။ ကံတရား၏ အကူအညီပေးခွငျး ၊ နှောကျယှကျခွငျးကို မခံရပဲ မိမိရညျမှနျးထားသလောကျ အောငျမွငျလတ်တံ့။ စိတျပူစရာအခြို့ရှိသျောလညျး ပညာရေးရညျမှနျးခကျြမြား ပွညျ့မွောကျအောငျမွငျ နိုငျပါမယျ …။
ပညာရေးကံကောငျးစရေနျ – မနကျစောစော သဈသီး(၆)လုံး ၊ နှငျးဆီ(၇)ပှငျ့၊ သောကျတျောရေ(၃)ခှကျ၊ ဖယောငျးတိုငျ(၃)တိုငျ ဘုရားလှူပွီး မိမိဖွဈခငျြတာကို ပွတျပွတျသားသား သဲသဲကှဲကှဲ အသံထှကျဆုတောငျးပါ။ ခြိုးမယျ့ရထေဲမှာ နှငျးဆီ(၃)ပှငျ့ထညျ့ပွီးရေးခြိုးရငျးလညျးဆုတောငျးပါ …။
ကနျြးမာရေး – ခွထေောကျ ၊ ခါး ၊ အာရုံကွော ၊ ကြီးပေါငျး နှငျ့ ပကျသကျသောရောဂါ ဝဒေနာမြား သတိထားသငျ့ပါတယျ (တပျအပျဖွဈမညျဟု မဆိုလိုပါ ။ သတိထားရနျဖွဈသညျ)
အထူးလိုကျနာရနျ … ကောငျးသောအပွောငျးအလဲမြားဖွဈရနျ ဘာသာရေးပိုလုပျသငျ့၊မတ်ေတာစိတျမှေးသငျ့၊မကွာခဏအိပျယာပွောငျးအိပျသငျ့။ခရီးခဏခဏထှကျသငျ့တယျ …။
အခကျအခဲကွီးကွီးမားမားမြား ကွုံတှရေ့ပါလြှငျ …. တနင်ျလာနညေ့ဝတျအိပျထားသော အဝတျဟောငျးတဈစုံကို နောကျနမေ့နကျစော လမျးတှငျသှားစှနျ့ပါ။ (ငါ့မှာရှိနတေဲ့မကောငျးတဲ့အခိုကျအညံ့တှအေားလုံး ပါသှားပါစလေို့ဆုတောငျးပါ) (၂)လတဈခါလုပျပါ။အရေးအကွောငျးကိစ်စပျေါလြှငျထပျလုပျပါ …။
ယတွာ။ ။မညျသညျ့နတှေ့ငျမဆို မနကျ(၇)နာရီ(၆)မိနဈတိတိတှငျ သဈသီး (၆) လုံး ၊ နှငျးဆီ(၃)ပှငျ့ ၊ ဆှမျးပူပူ (၃)ပှဲ ၊ သောကျတျောရေ (၁)ခှကျ ၊ ဖယောငျးတိုငျ (၇) တိုငျ ၊ ကို မိမိနအေိမျဘုရားတှငျ မကွာခဏ လှူဒါနျးဆုတောငျးခွငျးဖွငျ့ တဈနှဈတာလုံး အခိုကျအညံ့မြား ကငျးစငျကွပြေောကျပွီး အကွံအစညျမြားအောငျမွငျ နိုငျမညျ …။ (အကွောငျးရှိတိုငျး မကွာခဏပွုလုပျနိုငျသညျ)
Previous: Offlane Guide
Next: အင်္ဂါသားသမီးများအတွက် ၂၀၁၉ ခုနှစ် (၈)လပိုင်း တစ်လစာ ဟောစာတန်း